YawNi Dot Zagar Wyne – Purple Feminist Group
HomeYawNi Dot Zagar Wyne
The Vagina Dialogues is envisioned to beacreative and community-led space, with regular events that bring people together to talk about themes related to pleasure, sex, menstruation, masturbation, body image, sex work, violence, child birth, rape, and orgasms. The aim is to inspire social and cultural change in how we address the vagina!
Following the success of The Vagina Monologues – shown for the first time in Myanmar in March 2018 – we want to continue the important and invigorating conversations around the diversity of women’s experiences, beauty, pain, emotions, and thoughts reflected in the stories that we hold.
The Vagina Dialogues intends to beasafe and artistic space for people to come together, with respect for differences, compassion to listen, and eagerness to explore and understand.Different topics, speakers, presentations, and ideas will be hosted at each event. Events will be organized in Burmese and in English onaregular basis. Stay tuned in the group for updates!Please get in touch with any questions, comments, or ideas. You are also welcome to hostaVagina Dialogue event, as it is not limited to Yangon; just get in touch.We look forward to this space growing, and see you at #Vagina-dialogues!
If you want to join our Facebook closed group
ယောနိတို့ စကားဝိုင်း #YawNiDohZagarWyne
ယောနိတို့စကားဝိုင်းဆိုတာကတော့ လိင်(ကာမ)ဆက်ဆံခြင်း၊ သာယာမှု၊ ရာသီသွေးဆင်းခြင်း၊ အာသာဖြေခြင်း၊ ခန္တာကိုယ်၊ လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့် အသက်မွေးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ မုဒိမ်းမှု၊ လိင်စိတ် အားဖြည့်ခြင်းတို့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အားလုံးအတူတူဆွေးနွေးနိုင်အောင် တွေ့ဆုံပွဲတွေပြုလုပ်မယ့် ဆန်းသစ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၂၀၁၈ မှာမြန်မာပြည်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Vagina Monologues ရဲ့ ပထမဆုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့နာက်မှာတော့ ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ မတူညီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အလှအပ၊ နာကျင်မှု၊ ခံစားချက်များနဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဖော်ပြတဲ့ ပုံပြင်တွေကို စုေဆောင်း၍ အားဖြစ်စေတဲ့ စကားဝိုင်းတွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်လိုပါတယ်။
ယောနိတို့စကားဝိုင်းမှာ ဆက်လက်သိမြင်လိုခြင်း၊ နားလည်လိုခြင်းပြင်းပြပြီး၊ နားထောင်နိုင်မှုအားကောင်းသော၊ မတူညီမှုများအပေါ် လေးစားသော လူသားအားလုံးအတူတူ လုံခြုံစွာဖြင့် တည်ရှိနေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်တယ်။
မတူညီတဲ့ ခေါင်းစဉ်၊ ပြောဆိုသူများ၊ တင်ပြမှုများနဲ့ အကြံဉာဏ်များကို ပွဲတိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြသသွားပါမည်။ မြန်မာဘာသာ စကား နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် အလှည့်ကျ စီစဉ် တင်ပြသွားမယ်။ အားလုံးကို အသိပေး နိုးကြားပေးပါမယ်နော်။
မေးခွန်း၊ အကြံဉာဏ်နဲ့ အကြုံပြုချက်လေးတွေကိုလဲ ပေးပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယောနိတို့စကားဝိုင်းက ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲ သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်သလို သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးဆောင်ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ကိုသာ ဆက်သွယ် အသိပေးပါ။
ဒီနေရာလေး ဆက်လက်ကြီးထွားလာဖို့ မျှော်လင့်ရင်း ယောနိတို့စကားဝိုင်းမှာတွေ့မယ်နော်။